Version 0.2.7 – Iran “Doorashada”
June 19, 2009 by dalabyo 5 Comments
Thanks to doorashooyinka Iran Latest Google ayaa daray taageero Persian si google translate, Waxaan go'aansaday in aan u soo guurteen. Haddii aad rabto inaad – aad hadda awoodaan in ay leeyihiin site wordpress laguu turjumo si Farsi ama ka soo Farsi. Just tag interface maamulka iyo dar af this, its in fudud. Wax kale waa cusub, weli.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: google turjumi, yaryar, luqado badan oo, plugin wordpress
marka ugu horeysa inaan rabo inaan ku mahadsantahay plugin weyn :).
Markaas kaliya i soo gudbiyaan si aad u yar cayayaanka ah i helay.
Haddii on blog ah (WP 2.7.1) waxaan go'aansaday in ay muujiyaan bog ee “Options -> Reading” maqaalladii plugin show ee bogga hore ma bogga soo xulay (la la'aantood url muqato).
Waxaa laga yaabaa inaad ku dari kartaa meel ama in aad FAQ badan isticmaala isticmaala marin fatxi php (http://aciddrop.com/php-speedy/) waxay yeelan doonaan in barkinta, darto “transposh.js” ee liiska iska indha, riix “Qaabeynta Test” then reactivate it 😉 .
Iyo sidoo kale i qabto su'aal ah.
Waxaan baari turjumaan Global (http://www.nothing2hide.net/wp-plugins/wordpress-global-translator-plugin/) iyo u isticmaali engine ka Translator Google sidoo kale laakiin waa arrin cajiib ah, turjumidda waa differents…
Maxaad turjumidda automatic Isku mid ma aha markii aan isticmaalay plugins ama kanaa ? Tarjumaadda ka turjumaad Global u muuqataa in ay wax yar ka fiican yahay adaa leh :$ .
Laakiin waxaan hubaal door bidaan in ay taageeraan shuqulladiisa oo lacag la'aan ah sida mid sidaadoo kale ay “ee” version.
TIA ee jawaabtaada(s).
Waad ku mahadsan tahay faallada, Waxaan kuugu dari doonaa this item in FAQ ah.
Marka laga auto kala duwan turjumaad, tan iyo Transposh jebiyo text qaybaha gaaban oo fasiraya kuwa, halkii ay alaabta badan oo adag – turjumidda waxaa laga yaabaa in wax yar oo kala duwan, Waxaan qorshe ee ku daray gabal adag oo dheeraad ah u habeeynaayo mustaqbalka, taasina hagaajiyo oo laga yaabo on marayso qaban.
Calankeena comments more.
Maxammad Xassan sheegay
Waxaan aad ixtiraamaan ee ku daray in reer Faaris admin plugin ku mahadsanid
Iyadoo rajada guusha kordhaya
u soo turjumo farsi iyo luqadaha kale guji aad calanka ku fura iyo turjumi comment this
Waxaan ahay isticmaalaya plugin tan iyo i jeclaan ku darto waxa daasadda doorasho plugin this
whene bog turjumi dhameystiran , dari this page in sitmap.xml
nabad i rakibi plgin ka dib 2 maalin in admin degaanka show
Wadarta 2125 weedho turjumay.
laakiin hadda 5day lambarkan ma uper iyo qaar ka mid ah qoraalka ka dib ma turjumi
waxa ay hadda donig ?